विचार / अभिमत – Page9– Dhadingnews.com – धादिङ जिल्लाको पहिलो डिजिटल पत्रिका
हँसाउन भन्दा रुवाउनै सजिलो हुन्छ-दिपाश्री निरौला
चर्चित कलाकार दिपाश्री निरौला कलाकारिता जगतमा चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन । चलचित्र नासो, गाउले,सुकुम्वासी परेली, घरसंसार, चमत्कार, चाँदनी, चलचित्र छ एकान छ समेत अभिनय गरिसकेकी छिन् उनले । त्यसैगरी कुनै समय रेडियो नेपालको चर्चित कार्यक्रम रामविलास र धनियाँ कार्यक्रम पनि उनको चर्चित थियो । अहिले उनी नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको..
शैक्षिक जगत: शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्…..
– टीकाराम रेग्मी “टीका सर, तपाईंलाई मन पनि पर्ने एउटा कार्यक्रममा भाग लिनुहुन्छ ?” अनायासै लक्ष्मण शर्माले सोध्नुभयो । ‘मन पर्ने’ भनेपछि भाग नलिने त कुरै भएन । भनेँ, “लिन्छु नि, के होला त्यस्तो ?” मलाई कार्यक्रमबारे जानकारी नै नदिई मेरो मनको कुरा बुझेझै“ गरी गर्नुभएको प्रश्नको प्रतिक्रियामा मैले भनेँ । सत्यवती उच्च मावि, आदमटार,..
साइकल सहित भैंसीलाई पानी दिने भाँडो चोरिँदा
– रामचन्द्र भट्ट ‘ओऊ, हाउ नाइस इज योर कार’ (ओहो, तिम्रो कार कति राम्रो ।)’ बिहीबार कामबाट घर फर्कनका निम्ति कारमा चढ्दै गर्दा एक अपरिचित व्यक्तिले मेरो कारको निकै प्रशंसा गर्‍यो । मैले दुई वर्ष पुरानो भन्दा उसले मरिगए पत्याएन । ‘मलाई पनि होण्डाको सिआरभी कार सार्है मन पर्छ । यो कार बेचेर तिम्रो जस्तै किन्ने विचारमा छु,’ उसले आफ्नो..
पाइएला त खान पाउने अधिकार ?
शिव सत्याल केही समयअगाडि एक महिलाले आफ्ना बच्चालाई खाना खुवाउन नसकेपछि बच्चासहित भेरी नदीमा हामफालेर आत्महत्या गरिन् । यो घटना तत्कालका लागि सञ्चारमाध्यमको समाचारको विषय बन्यो । देशका ठूला पार्टीहरूका गन्यमान्य नेताहरूले सहानुभूतिका शब्द खर्चिए । खान पाउने नागरिकको अधिकार हो भन्ने कोणबाट पर्याप्त छलफल पनि भएन र यस विषयमा..
जाडो महिनामा खानैपर्ने आहार
जाडो महिना सुरु भइसकेको छ । विशेषगरी आज राजधानी लगायतका विभिन्न स्थानहरुमा वर्षा भएसँगै चिसो अत्यधिक बढेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ । जाडो मौसम सुरु भएलगत्तै हामीलाई रुघा, खोकी, ज्वरोजस्ता रोगहरुले सताउने गर्दछ । जाडो मौसममा आफूलाई न्यानो राखिराख्न मानिसहरु तातो–तातो चिया पिउने..
वन, वनस्पति र जलवायु परिवर्तन
रघुराम पराजुली रूख–बिरुवाको राम्रो हेरचाह भयो भने कार्बन उत्सर्जनको मात्रा धेरै गुणा कम हुन जान्छ र जलवायु परिवर्तनका असरबाट पर्ने समस्याहरू पनि कमी हुन्छन् । कार्बन तथा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तनका असरहरू बढ्ने हुँदा वन वनस्पति संरक्षण गरेर यस्ता ग्याँसहरूको उत्सर्जन कमी गर्नु अत्यावश्यक छ । जलवायु परिवर्तनबाट..
संबिधान कहिले आउछ नेता ज्यु ?
बिष्णु सामरी देशको मुल कानुन अर्थात 'संबिधान' को बिषयलाई लिएर देशमा दश बर्से जनयुद्द चल्यो त्यसपछी लगभग आठ बर्ष भईसक्यो देश संक्रमणकाल बाट गुज्रिरहेको छ । यस अबधिमा नेपाली जनताहरुले धेरै दु:ख कष्ठ सहे पहिले संङ्कटकाल त अहिले संङ्क्रमण काल आखिर नेपाली जनताहरुलाई यो बिभिन्न थरिका कालबाट कहिले मुक्त गर्ने ? २०६४ देखी २०७१ सम्म आउँदा..
अन्यौलका बिच धादिङ महोत्सवको तयारी अघि बढ्दै
केशव अधिकारी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय मेला तथा चौथो धादिङ महोत्सव २०७१ शुरु हुन केही घण्टा मात्रै बांकी रहेपनि धादिङ जिल्ला सदरमुकाम र यहांका व्यवसायीलाई महोत्सवको रौनकले छुन सकेको छैन । वजार क्षेत्रमा महोत्सवको प्रचार प्रसारको रौनक नदेखिएपनि महोत्सव स्थल नीलकण्ठ नगरपालिकाको रायटारमा मञ्च तथा स्टल निर्माण,रमाइलो मेलाको तयारी भने अघि..
गीतसंगीत दुखसुखको साथी – रिता बुढाथोकी
रिता बुढाथोकी लोक तथा आधुनिक गायिका हुन् । २०६० सालबाट औपचारिक रुपमा लोक संगितिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । हालसम्म उनको स्वरमा पिरतीको भारी, साथी संगी घन्कियो मादल, सोल्टीनीलाई वैना मारेछु, नानी आखाँमा छाउन मन लाग्यो, मुसुक्क हास्योनी लगायतका गित बजारमा आइसकेको छ । निकै मिहेनती शालीन एवं मिलनसार गायिका रिता बुढाथोकीसंग धादिङ न्यूज..
अघिल्लो वर्ष माघको एक साता धादिङ, चरौदीका बासिन्दा अत्यन्त सक्रिय भए । हरेक दिन माइकमा वेदका ऋचापाठ र पूर्णाहुति गरेको देखियो । चरौदीवासीको सामूहिक सप्ताहको एक मात्र उद्देश्य थियो, सडक दुर्घटना कम होस् र दुर्घटनामा मरेकाको आत्माले चिरशान्ति पाओस् । विडम्बना के भने सप्ताहको शक्तिले न कुनै चमत्कार गर्‍यो, न त दुर्घटनाको संख्यामै कमी आयो..
नारायणहिटी दरवार संग्रहालय देखाउने नाटकमात्र
किरण अधिकारी झण्डै २४० वर्षको राजतन्त्र अन्त भएपछि तत्कालीन राजाहरुको लागी बनाइएको नारायण हिटी राजदरवारलाई अहिले नेपाल सरकारले संग्राहलयमा परिणत गरेको छ । तर सर्वसाधारण जे आशा, भरोसा, इच्छा र जाँगर बोकेर संग्राहलय जान्छन् । त्यहाँबाट बाहिर निस्कदा निरास एवं आक्रोश लिएर निस्कन्छन् ।२०५८ साल जेष्ठ १९ गते “राजदरवार हत्या काण्ड ” भयो ।..
नुवाकोटको जिल्ला अस्पताल कहिले सुध्रेला ?
किरण अधिकारी विदुर÷नुवाकोटको मात्रै नभई कुनै वेला रसुवा, नुवाकोट र धादिङ्ग जिल्लाको क्षेत्रीय अस्पताल को रुपमा परिचय पाएको जिल्ला अस्पताल त्रिशुली कोलोनी सुधार हुने संकेत छैन । सुधार हुने भन्ने की परिवर्तन हुने भन्ने वर्ष वा दुइ वर्षमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन परिवर्तन हुन्छ । मेडिकल अधिकृत परिवर्तन हुन्छ तर अस्पतालको कुनै पनि काममा भने..
खोज्छन् मान्छे खाडी खाडी -पैसा लुक्छन झाडी झाडी
गोपाल फ्युवा धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका चिसो र लेकाली क्षेत्रमा तामाङहरुको घना वस्ती छ । आर्थिक हिसावले निम्न वर्गीय किसानहरुको बसोबास रहेको छ । यहाँका धेरै युवाहरु विदेश जान घरघडेरी बन्धकी राखेर खाडी उडि रहेका छन् । साहुँलाई धनी बनाइरहेका छन् । खाडीको कमाइ सुखद छैन दुखत पनि छ । २ वर्ष आफुले लगेको खर्च तिर्दैमा ठिक्क हुने कारण पहिलो छुट्टी..
‘जस्ट स्लो… मोसनमा’ राति १२ बजेसम्म कपाल कन्याउने काम हुन्छ -(कक्रोच)
हास्यटेलिशृंखला भद्रगोलमा कक्रोचको भूमिका गर्दै आएका हरि निरौला (कक्रोच) आफ्नो अभिनयभन्दा बढी कपालका कारण चर्चित छन् । भद्रगोलमा ‘जस्ट स्लो… मोसनमा’ भन्ने थेगो बोल्ने कक्रोचसित कपालको विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी : कपाल लामो पाल्न थाल्नुभएको कहिलेदेखि हो ? तीन वर्षजति भयो । कसरी उत्पन्न भयो जस्ट स्लो… मोसनमा जोगीको..